Anọ mba 100% na-agbanwe agbanwe n'oge 2017, kedu ihe ha bụ? | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Anọ 100% mmeghari ohuru mba
Tomas Bigordà | | Bayam, Ike ikuku, ike hydraulic, Ike imeghari ohuru
Maka mba ndị a, oke ojiji nke ume ọhụrụ abụghị ebumnuche ga-enweta, kama ọ bụ mmezu iji kwado. Na-eme ka ọtụtụ n'ime gị ihe ndi ozo Mba ụfọdụ emeela ka nrọ nke ịnweta 2017% isi nweta ume ọhụrụ na 100.
Steeti anọ na-eme ọfụma o nwere ike imeghari ohuru, na-enye nkuzi akụ na ụba ikike akụ na ụba buru ibu, ya bụ, iwepụta mkpa ha niile na ume "akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ".
1.1 Ike imeghari ohuru
Nke mbụ n'ime mba ndị a bụ Uruguay Na Septemba 14, mba ndịda South America nwetara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 24 nke ọgbọ site na ikuku, hydroelectric, biomass na anyanwụ.
Gọọmentị nke obodo a gosipụtara na n'ime afọ 6 gara aga, Uruguay nwere agbagọ ihe karịrị ijeri dollar 22 na-agbanwe agbanwe nke ume ọhụrụ, iji merie n'ụzọ dị otu a dabere na mmanụ na gas.
Ramón Méndez, National Director of Energy na onye nkwalite nke afọ 25, nke kemgbe 2008 na-achọ ịgbanwe mgbanwe a Mmepụta ike Uruguayan, kwuru "Anyị ga-enwe ọtụtụ oge ebe ihe ruru 100% nke ọkụ eletrik anyị na-eri na Uruguay ga-abụ nke ifufe sitere na".
Obere obodo a nke ndi mmadu bi na 3,3 ejirila ikike zuru oke nke osimiri ya mee ihe maka omumu hydroelectric ma na etinye ego kwa ubochi 3% nke Gross Domestic Product (GDP) n'ime ngbanwe mmeghari iji nweta ochichi ike na otutu oge okochi na belata akara ukwu gburugburu ebe obibi ya.
Dabere na Méndez, "N'ime ike niile Uruguay na-eri, ihe dịka 50% dabere na ume ọhụrụ, yana n'ime ọkụ eletrik na 2015 karịa 90% ga-esite na ume ọhụrụ."
Ọ bụrụ na anyị lelee mkpesa sitere na World Wide Fund for Nature (WWF na Bekee), Costa Rica, Uruguay, Brazil, Chile na Mexico na-eduga mbọ na mpaghara ahụ mgbanwe paradigm ma họrọ maka ume ọhụrụ karịa mmanụ ọkụ dị ka mmanụ na kol.
Mgbe Costa Rica bidoro ikwu maka ume dị ọcha karịa afọ iri atọ gara aga, ọ dị ka egwuregwu, mana ọ teghị oge ka ndị ọzọ copyomie usoro ya. Tutu esịm mfịn, idụt oro ẹkotde nte Central America Switzerland, amalitela inwe nnukwu ihe ịga nke ọma karịrị nkwa na ezi ebumnuche.
Costa Rica na-aga n'ihu iji bụrụ mba mbụ Latin America nke nwere ike imegharị 100%, na-eji ohere hydroelectric, geothermal, anyanwụ na biomass.
Fundtù Na-ahụ Maka Anụmanụ Worldwa (WWF) na-egosi na mba ahụ adịla nso iru ọhụrụ milestone na akụkọ ihe mere eme nke ike ya: ịghọ mba mbụ na Latin America nke ike 100% na-agbanwe agbanwe.
Ọ bụrụ na a nyochaa akụkọ ahụ, WWF na-egosi na Costa Rica nwere ikike nke giga giga 223.000 kwa afọ nke hydroelectricity, nke dị na erughị 10% ka a na-erigbu, ma nwee nnukwu ikike ikuku na ikuku ikuku. "Ọ bụ paradaịs ike ume ọhụrụ kachasị ukwuu na mpaghara Central America."
Tụkwasị na nke ahụ, gọọmentị setịpụrụ onwe ya ihe mgbaru ọsọ nke inweta akụ na ụba na-anọpụ iche na carbon, ma maka nke a, ọ họọrọ iru 2021 na oriri ike kpam kpam dabere na isi mmalite.
Na 1998, e bidoro osisi hydroelectric nke mbụ na mba ahụ. Nke a na - emepụta 90% nke ike ọ chọrọ, SME nke mba ahụ dabere na mgbanwe nke ngwaahịa ugbo na imepụta uwe. Ndị nke a ritere uru site na ntozu obodo ahụ ịnata elele nke Iwu Uto na Ohere Okpuru Ọchịchị Africa. Lesotho jisiri ike nweta mmeghari 100%, n'ihi ike hydroelectric mana ọ ka na-alụ ọgụ na oké ọkọchị n'oge ahụ ọ na-azụta ume site na mba ndị ọzọ gbara ya gburugburu. A ga-agbakwunye usoro mmeghari ohuru ma na-edozi ya.
Ike dị na obere agwaetiti a dị n'ebe ugwu Europe dabeere n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ume ọhụrụ. N’afọ 2011 mba ahụ mepụtara 65 GWh nke isi ike, nke ihe kariri 85% sitere na ikike mmeghari ohuru nke obodo.
Ike ikuku nke oku site na ugwu oku nyere uzo ato n’ime ike mbu, ya na hydroelectric 19,1% na uzo ozo. Na 2013, ọkụ eletrik a rụpụtara ruru 18116 GWh, nke ewepụtara ihe 100% ume mmeghari "gafere 99% na 1982 ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị ya kemgbe ahụ."
Isi ojiji nke ike ikuku ha bụ ikpo ọkụ nke ụlọ, na 45,4% nke mkpokọta geothermal niile, na mmepụta ọkụ eletrik, na 38,8%.
Ihe dị ka 85% nke ụlọ ndị dị na mba ahụ bụ ha na-ekpo ọkụ jiri ume ọhụrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Anọ 100% mmeghari ohuru mba
Soria, paradaịs nke biomass
Ihe mmeghari ohuru na-arịọ ka a taa ndị na-emerụ ahụ ahụhụ